ငါဆွေမျိုးတစ်ယောက်ရှိပေမယ့်ချစ်သူများနေ့ကိုမုန်းတယ် - သတင်း
ပထမ ဦး စွာ - စိတ်မကောင်းပါဘူး Matt ။ ချစ်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးပန်းများကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ယူခွင့်ပေးပါ ဒါပေမယ့်ငါ Valentine Day ကိုမုန်း။
အများဆုံး instagram ပို့စ်တွင်ကြိုက်တယ်
လူတွေကဒါကိုချစ်သူများနေ့ရဲ့နေ့လို့ပဲမင်းထင်တယ် မဖြစ်မနေ ညစာစားပွဲအတွက်ဖြစ်စေ၊ ရပ်။
သင်၏ gf / bf / friend / self / cat ကိုသင်ညင်ညင်သာသောငရဲအခါတိုင်းညစာအတွက်ယူပါ။ yo '' မိမိကိုယ်ကိုဆက်ဆံပါ။
သူတို့ကရယ်စရာအလွန်အကျွံအရွယ်အစားကတ်များသည်။ ဒီဝယ်သူကဘယ်သူလဲ ???? ထိုလူအားသင်မပေးမီသင်မည်သို့သိုလှောင်ထားသနည်း။ သူတို့ကကြီးမားပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မှာအမြဲတစေချစ်ခြင်းမေတ္တာနှလုံးသားတွေ ၀ န်းရံနေတဲ့ဝက်ဝံပုံနဲ့ပူဖောင်းတစ်လုံးပုံသဏ္someာန်တွေရှိတယ်၊ အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဒါမှမဟုတ်ငါ့ရှေ့မှောက်မှာရေးထားတဲ့ငါ့နှလုံးသားကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာတဲ့အရာတစ်ခုခုဝိုင်းရံနေတယ်။
ဒါဟာငါတို့ထံမှတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး
ချောကလက်ဈေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကောင်းသည်ဟုယူဆသူမည်သူမဆိုပစ်ပယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာအမျိုးသမီးလူ ဦး ရေအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ငါတို့ချောကလက်လိုအပ်တယ် ဒါဟာရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်ရန်လေကိုလိုအပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုလိုအပ်သည်။ ချစ်သူများနေ့အတွက်ကြောင့်တစ်လလုံးအကုန်အကျပိုမိုများပြားလာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောclichéစကားပေမယ်တစ်စုံတစ် ဦး အဘို့သင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတစ်ရက်မှကန့်သတ်မရသင့်ပါတယ်။ ငါချစ်တယ်လို့ပြောပါငါ့ကိုပန်းတွေ ၀ ယ်ပြီးငါထိုက်တန်တဲ့နေ့တိုင်းဆံပင်တွေနဲ့ဆော့ကစားပါ။
ဒါဟာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ploy ရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတောင်မယ့်သူကလူတွေကိုအမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းရသို့မဟုတ်သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူချစ်သူများနေ့နှင့်အတူဖြုန်းဖို့သိသိသာသာအခြားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ခံစားရရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ရှုမြင်လည်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
* အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်း။ ။ တစ်နေ့တာလုံး၏နေ့ရက်ဖြစ်သည်! ဒါဟာအတော်လေးစာသား 14 ဖြစ်ပါတယ်thအခြား (၁၂) လကမှဒုတိယလ၏တစ်ရက်၊ ပိုကောင်းသည်လများလား။
သင်ဒီတယ် မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပတ်ပတ်လည်မှာထား၊ Thelma နှင့် Louise သငျသညျအားကောင်းတဲ့လွတ်လပ်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ကသက်သေပြရန်မ Valentine Day ကိုမလိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။